भर्खरै हेर्नुस पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई के भयो यस्तो Lahure | Public 24Khabar
Home News भर्खरै हेर्नुस पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई...
भर्खरै हेर्नुस पहिलो पटक मिडियामा! लाहुरे राहुल र स्मिताको मिलनपछि सन्तोष दाइलाई के भयो यस्तो Lahure
हजुरबुवाको बाटो पछ्याउंदै राहुल पनि इन्डियन आर्मीमा भर्ति भए । इन्डियन आर्मी भएको ३ बर्ष पछि राहुल बागडोगरामा गए । त्यहि बेला स्मिता लामासंग भेट भयो । राहुलको पहिलो भेटमै उनको प्रेम बस्यो । भेटेको केहि दिनमै उनले स्मितासंग बिवाह भयो ।
Previous articleसर्वोच्च अदा*लत जाँदै प्रधानमन्त्री ओली, एक्का*सी लिए यस्तो निर्णय,अत्यन्तै क*डा सुर*क्षा ब्यवस्था
Next articleभर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारको यस्तो निर्णय, सबैतिर छायो खुशीयाली !Pm Kp Sharma Oli cabinet meeting.